Abaqulunqi baqulunqa iintlobo ezininzi zeenitshala, ezihluke ngokuthe ngqo kwiimifanekiso eziqhelekileyo. Ngoko ke, amashalofu ngoku abe ngamanyathelo phantsi kweemibhede zomabhobho, iitafile ziguqulwa zibe yizithuthi ezihambahambayo kunye ne-trellises, kwaye ukusuka kwisikhwama esinezakhono eziqhelekileyo zenziwe nge-pouf ekhululekile. Ewe, ewe, i-pouf, onokuhlala kuyo, ufunde incwadi okanye uxoxe nomhlobo.
Isikhwama se-Pouf sibukeka njengesikhwama esikhulu, kodwa induduzo yayo inokuthelekiswa nefu elikhulu elikhulu. Isihlalo sokuqala siphendula ngokuphindaphindiweyo imida yomzimba, ngoko uhleli kuyo unokususa uxinzelelo lwe-muscle kwaye ukhulule ngokukhulu. Iimveliso ezinjalo zenzelwe ukusetyenziswa kumakhaya nakwiindawo zokuhlala, imizi yeeholide kunye neehotele, ama-cinema kunye namaqela, amaziko empilo, ama-kindergartens kunye nezikolo. Imeko kuphela yinto yokuba ingaphakathi legumbi kufuneka libe yoluhlobo lwangoku, mhlawumbi ubukho bezinto eziqhakazileyo, kuba yindonga yokudonga, ifenitshala okanye isichotho.
Imbali yengxowa yesikhwama
Ifenitshala engenampahla okanye i-binbeng yaqalwa e-Italy. Abadumi beembali bajonga umdali we-puff soft, uRoger Dean, owayesebenzela i-fenethi edumile yeFenitshala. Ukususela ngo-1967, waqala ukuhlakulela izitulo zokuhlala ezingaqhelekanga, ezibandakanya iingxenye ezili-12, ezidibene kunye kunye nobushushu obunqabileyo. Le ndlela entsha yabizwa ngokuthi "i-Urchin Sea", eguqulelwe ngokuthi "ukuLwandle lokuThuthuka". Ukuqulunqwa kwesikhwama esithambileyo sebhegi kwakungumzamo wokuqala wokubuyisela ifenicsimbi okanye ifenitshala yokhuni. Namhlanje, i-binbegs yangena kwimveliso enkulu kwaye yaba intandokazi yolutsha kunye nabalandeli besitayela esingavamile. I-pouch-bag-pouf bag iqukethe izitya ezimbini: ukuhlobisa kwangaphandle nangaphakathi, okwenza njengenkonkxa yokugcwalisa. Isikhumba sangaphandle singagqitywa kwintsimbi yokuvelisa ifenitshala: isintu, isikhumba somsebenzi, i-nylon, amathayi, njl. Sebenzisa i-taslan ne-oxford-materials, ukukhumbuza i-plashevku. Isembozo sangaphakathi senziwe ngeempahla ezixubekileyo, ziboshwe kwiibumba zohlobo oluhlukeneyo, umzekelo ukotoni kunye ne-polyesterol. Olu dibano lunika amandla kunye nokukwazi ukuvumela emoyeni, okubaluleke kakhulu kwi-cover yangaphakathi yesitulo-sihlalo.
Ukufakela isikhwama se-pouf singabhontshisi, i-husk ye-buckwheat husk, i-PVC granules, okanye ezinye izinto. Kodwa i-filler ethandwa kakhulu yi-polyester ene-foam edibeneyo kunye nokongezwa kwee-felts. Ezi zinto zinezi zinto ezilandelayo eziphathekayo:
aziqukethe izinto ezinokuba ngumthombo wokuphuhliswa kwee-microorganisms, ngoko azibonakalwanga kwiibhaktheriya, iifungi , iigundane kunye nobuninzi;
i-polystyrene ayifuni, kodwa iyancibilika;
ubungane bendalo - nokuba izitya zangexesha elilodwa zenziwa kwiipolisi zengubo;
ukuqhuba kwe-thermal low;
Iipopu-iingxowa kwi-design yangaphakathi
Njengoko sele kukhankanywe ngasentla, i-binbeg iya kulungeleka ngaphakathi kwendawo yokuhlala yanamhlanje. Unokufakela inkukhu kwiholo okanye kwigumbi lokulala. Ifenitshala enjalo iya kwenza i-interior yegumbi ibe yinto yanamhlanje, kwaye uhleli kuyo unakho ukulibala malunga neentsuku ezinobunzima kwaye ujabulele lula.
I-puppy ekhethiweyo ekhethiweyo ethatha i-design yekamelo labantwana. Ngombulelo kwi-design elula kubo, unokwenza izinto zangaphambili, umzekelo, uthabathe umkhuhlane webhola okanye ibhola yebhola, yenza kube ngathi ipey okanye ibhanana. Iingxowa zeengxowa zezingane zivame ukuba zenziwe ngeempahla eziqaqambileyo kunye nomhlobiso okhunjulwayo. Ngoko abantwana bahlakulela ingcamango engcono, kwaye bahlala kwisihlalo seenqwelo ezikhanyayo kunye nokushicilelwa kwe-asterisk okanye iintyatyambo zonyango. Ukongezelela, isihlalo esingenasiphelo asinayo ingqungquthela ebukhali, engabangela ukulimala kunye nemivimbo. Abantwana banokuqhaqhazela kwigumbi baze bagxume esihlalweni ngaphandle kwengozi yokuhlambalaza kunye nokuvuna .
3d imaphephethi - aphule indawo
Umqhekeza ngezandla zakho
Glue for plailing skirting
Iibhenki ezenziwe ngentsimbi
Igumbi kwisitayela se-shebbie sec secrets of design design
Ukufudumala kwe-attic ukusuka ngaphakathi ngezandla zakho
Ifoto yamaphephadonga ngaphakathi kwekhitshi
Igumbi lamabantwana enkwenkwe - ifenitshala
Ifenitshala - iifubeni zabadwebi
Iholide eSaudi Arabia
ULobelia - ukhula ukusuka kumbewu
Isobho seentlanzi kwi-cod - recipe
Indlela yokukhetha umnkcenkceshela?
USazan wabhaka ehovini
Ingxabano yesigxina: Kate Middleton akhulisi abantwana ngendlela yobukhosi?
Unomdla njani umntwana ngokufunda?
Ukuzivocavoca ukuxinwa kwamatye
I-Recipe yekhekhe "I-Esterhazy" ekhaya
Cherry kwi cherry
Iigqoko ngebhanki e-elastic ezantsi
Indlela yokwenza i-wardrobe ukususela ekuqaleni?
Ziziphi iinzuzo zokhula?
Indlela yokufaka udonga kwindlu?
EBrunei - ezikhangayo
Yintoni ongayithatha ngokukhalisa, ukwenzela ukuba ungadala?